TimeTrade: Avelao ny fandaharana hitarika ny fanendrena anao manaraka! | Martech Zone
Sabotsy, Martsa 9, 2013 Sabotsy, Martsa 9, 2013 Douglas Karr
Mbola mangidy amin'ny mitelina Blackberry aho Tungle ary avy eo namono azy. Fitaovana nahafinaritra izay tsy haiko nosoloina… hatramin'izao. Sendra tranokala nampiasa aho Tsindrio TimeTrade ho an'ny fandaharam-potoana manasongadina ary nahita teknolojia mendrika zaraina.
Ny fampiasam-bola kely ataoko TimeTrade Tena mendrika izany satria manala ny fifanakalozan-kevitra miverina sy miverina amin'ireo mpanjifako na ny fahatsinjovako amin'ny daty sy ora hihaonana. Ny rafitra dia mandray an'io fampiasa io ary manatanjaka azy amin'ny fonosany voalohany, na izany aza, mamela anao hametraka a Tsindrio raha handahatra bokotra mivantana eo amin'ny tranonkalanao! Ity dia endri-javatra tsara iray izay afaka mampitombo ny fiovam-po araka ny fanamarihan'ny TimeTrade etsy ambany:
Ireo prospect izay mandray anjara amin'ny alàlan'ny fandaharana antso fohy ho an'ny fampahalalana na fanampiana amin'ny varotra dia mahay kokoa ary vonona ny hiresaka amin'ny fividianana. Io dia manafoana ny tsingerin'ny varotra amin'ny alàlan'ny fitsipahana ny "tampony" amin'ny fantsom-pivarotana sy ny fahazoana miasa miaraka amin'ny fizotry ny varotra. Ireo mpanjifa TimeTrade dia mahita matetika ny fiakaran'ny 25% na mihoatra amin'ny fivarotana-to-varotra ary hanafohezana ny tsingerin'ny varotra amin'ny 40% na mihoatra.
Noho izany dia manantona amin'ny tranokalanao ny prospect ary liana. Raha tokony handefa fangatahana fangatahana izy ireo dia tsindrio raha handahatra sy handahatra ny fotoana nifanarahana izay nifindra araka ny tokony ho izy tamin'ny olona ao amin'ny ekipanao. Mahafinaritra ve izany? Tsy misy tabataba, tsy misy muss… nohavaozina ny kalandrie misy anao, havaozina ny varotra CRM anao, ary tapaka ny fanentanana hikolokoloana ny automatisation anao. Vita izany rehetra izany raha tsy misy olona manondrika rantsantanana ao amin'ny orinasa misy anao!
Ny TimeTrade dia miharo mivantana amin'ny Google Calendar, Hubspot, Marketo, Eloqua ary Salesforce. Ka tsy ny fitarihanao fotsiny no nametraka ny fotoana nifanarahana, fa ny mombamomba azy ireo ao amin'ny CRM na sehatra automatisation marketing anao dia havaozina koa!
Tags: tsindrio raha handahatratimetrade
Internet Explorer Mbola Top Browser amin'ny fijerena mailaka
Mar 10, 2013 amin'ny 5: 33 AM
Tiako ny Time Trade, asa tsara.
Mar 18, 2013 ao amin'ny 2: PM PM
Hey Doug, misaotra tamin'ny famerenana nahafinaritra. Ampahafantaro anay raha manana fanontaniana amin'ny TimeTrade ianao na olona!
Oct 8, 2014 amin'ny 6: 41 AM
Ny Time Trade dia misy lesoka lehibe amin'ny vokatra sy orinasa iray. Ny antony lehibe itadiavan'ny olona vokatra toy izao dia ny fampifanarahana – mba hahafahan'ny mpanjifa mandeha amin'ny Internet, mandahatra fotoana, ary dia izay. Tsy misy anefa ny fampifanarahana feno, farafaharatsiny, ho an'ny Kalandrie.app. Tsy afaka mamafa ny fotoana nifanarahana tamin'ny Kalandrie aho ary mamafa azy ireo amin'ny TimeTrade. Mila mankany amin'ny SITE TIMETRADE aho hitantanana ny kalandrie misy ahy. Notsipihako fa tsy "fampifanarahana" ity - fa ny "fampitahana" dia midika hoe "fampifanarahana" fa tsy nahazo fanohanana. Rehefa nangataka famerenam-bola ampahany aho satria ity dia endrika naseho tamin'ny doka, nolazaina tamiko fa tsy mamela famerenam-bola ny fifanarahana. Karazana orinasa manao ahoana ny valin'ny mpanjifa toy izany? Handao ny TimeTrade aho rehefa tapitra ny taona. Aza mividy an'ity vokatra ity.
24 Nov 2014 tamin'ny 9:57 PM
Ity fitaovana ity dia zavatra mora ampiasaina kokoa nefa mahasoa sy azo ampiharina miaraka. Ny varotra ara-potoana dia nahavita asa tsara tamin'ny famoronana ity zavatra milay ity. Tsy misy ahiahy intsony amin'ny fandaharam-potoana fanendrena. Ity tsipika ity dia milaza izany rehetra izany, "Ka tsy ny fitarihanao no nametra ny fotoana nifanarahana, fa ny mombamomba azy ireo ao amin'ny CRM na ny sehatra automatisation marketing anao dia havaozina koa!"